डा. भट्टराई भन्नुहुन्छ : कालापानी, लिम्पियाधुराबाट सैनिक फिर्ता गर्न भारत तयार भएको छ । – yuwa Awaj
काठमाडौं : भारतीय क’ब्जामा रहेका नेपालका अभिन्न भू-भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया’धुराबाट सैनिक फि’र्ता गर्ने विषयमा वार्ता गर्न भारत तयार भएको छ। नेपाली उक्त भू-भागका विषयमा द्वि’पक्षीय वार्ताकालागि भारत तयार भएको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले दावी गरेका हुन्। भारतीय विदेश सचिव हर्षव’र्दनको आजबाट हुने नेपाल भ्र’मणको स’न्दर्भमा रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै डा. भट्टराईले सो दावी गरेका हुन्।
विदेश सचिव हर्षव’र्दनको भ्रमणका क्रममा उक्त विषयमा समेत वार्ता हुने भट्टराईले जान’कारी दिए।
नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका स्थायी संरच’नाका कारण नेपाली भू-भाग परेको विषयमा समेत कुराकानी हुने भट्टराईले दावी गरेका छन्।
भारतीय विदेश सचिव हर्ष’वर्दन शृ’ङ्गल दुई दिने औप’चारिक भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदैछन् । उनी बिहान ११ बजे त्रिभुवन अन्त’र्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने छन्। परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार श्रृंगा’लाले बिहीबार सचिव पौड्यालसँग औ’पचारिक वा’र्ता गर्ने तय भएको छ ।
त्यसलगत्तै श्रृंग’लाले रा’ष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग शि’ष्टाचार भेट गर्नेछन् । भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र भविष्यमा दुई देशबीच हुने उच्च’स्तरीय भ्रम’णका बारेमा कुराकानी हुने बताइएको छ ।
यसैबीच, शुक्रबार भने श्रृं’गलाले कूटनी’तिज्ञ एवं अन्त’र्राष्ट्रिय मामिला जानकारहरू माझ भारतको छिमेक नीति, नेपाल-भारत सम्बन्धलगायतका विषयमा स|म्बोधन गर्नेछन् ।
विदेश मामिलासम्बन्धी थिंक’ट्यांक एसियन इन्स्टि’च्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टर’नेसनल अफे’यर्स (एआइडिआइए) को आयोजनामा विदेशसचिव शृं’गलाले होटेल सोल्टीमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यस कार्यक्रममा थिंक ट्यां’कका व्यक्तित्व, राज’नितिज्ञ, सरकारी एजे’न्सीका कर्मचारी, कू’टनीतिज्ञ, शैक्षिकका व्यक्तित्व, व्यापारी सहभागी हुनेछन्।
Prevगायिका समीक्षा अधिकारीको नयाँ गीत रातारात भाइरल…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
Nextमोबाइल र सि’क्री बन्धकी राखेर पनि श’व ज’लाएको छु सपना…हेर्नुहोस् । (भिडियो)